कार्यक्षमता, इमान्दारिता र संगठन हितका लागि दिपक थापा एक नम्बरमा – MEDIA DARPAN
Media Darpan Pvt. Ltd.	 पछिल्लो अपडेट Jun 17, 2022
काठमाडौं/ नेपाल पुलिसमा यतिबेला ठुल्लै दौडधुप चल्न शुरु भएको छ । किनकी अबको दश महिनापछिको ३० औं प्रहरी महानिरीक्षक को बन्ने र कस्लाई बनाउने भन्ने विषयमा यति बेला ठुल्लै चलखेल शुरु हुन थालेको छ ।
संगठनमा इमान्दारीता, कामको मूल्यकान भन्दा पनि राजनितिक पावर र कस्ले बढी चलखेल गर्न सक्छ भन्ने तिर यतिबेला प्रहरीको डिआईजी बढुवामा देखिन थालेको छ । १७ जना रिक्त डीआईजी पदको बढुवाको प्रतिस्पर्धामा ३० जना भन्दा बढी एसएसपीहरु डिआईजी बन्ने दौडधुपमा लागेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा यतिबेला पावर भन्दा पनि काम र क्षमताको आधारमा बढुवा प्रक्रिया बढाउन शुरु गरिसकेको छ । यसको उदाहरण भर्खरै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति हेर्दा पनि थाहा भईसक्यो । संगठनमा पैसा राजनितिक पावर भन्दा पनि क्षमता र दक्षका आधारमा बढुवा हुने गृहमन्त्रीको अभिब्यक्तिले पनि पैसा र राजनितिक पावर अब नेपाल प्रहरीमा नचल्ने उदाहरण देखिएको छ ।
क्षमता र संगठनका लागि इमानदार रहेका एसएसपी दिपक थापा अब हुने एसएसपी बाट डिआइजीका बढुवाका लागि एक नम्बरमा बढुवा हुने पक्कापक्की रहेका स्रोत बताएको छ । बढुवाका लागि यतिबेला एसएसपीहरु आ–आफ्नो नेताका भेटघाट, पावर र आफ्ना बारेमा लभिङ गरिदिनु परो भन्दै नेताको घर धाउन थालेका छन् । इमान्दार, क्षमतावान र संगठन हाक्न सक्नेलाई कसैले पनि पछिपार्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हुन् दिपक थापा ।
उनले प्रहरी निरीक्षक बाट जागिरमा प्रवेश गरे सगै हाल सम्म नेपाल प्रहरीको उत्कृष्ट कार्य गदै आएका छन् । कानुनमा स्नातक, जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर र राजनितिशास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेका थापाले नेपाल प्रहरीमा जुनसुकै शाखामा पनि अठ्यारो पर्दा उनले नै सहज रुपमा समधान गदै आएका छन् ।
संगठनका लागि इमान्दार रही हाल सम्म काम गदै आएका थापा नेपाल प्रहरी भित्र राम्रै छवि बनाएका प्रहरी अधिकृत हुन् । नेपाल प्रहरीमा जहाँ जस्तो सुकै परिस्थिती पर्दा पनि थापाले नै सहज रुपमा त्यसको समाधन गदै आएका छन् । उनले संगठन निर्माण देखि नेपाल प्रहरी भित्र नीति निर्माण गर्दा समेत उनको भूमिका राम्रै रहेको छ ।
उनै थापालाई नेपाल सरकारले कुशल, इमान्दार र संगठन हाक्न सक्ने लिडरको आधारमा अब हुन लागेको एसएसपी बाट डिआइजी बढुवाका लागि १ नम्बरमा बढुवा गर्न लागेको स्रोत जनाएको छ । कुनै लोभ लाभ भन्दा पनि निरन्तर संगठनलाई कसरी बलियो र निडर भई अगाडि बढाउने तिर लाग्ने थापा यस पटक एक नम्बरमा डिआइजी बढुवा सगै अबको १० महिना पछि नेपाल प्रहरीको ३० महानिरीक्षक हुने पक्कापक्की रहेको छ ।
को हुन् थापा अहिले सम्म के– के गरेका छन् संगठनमा ?
२०५२ सालमा प्रहरी निरीक्षक पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट नियुक्त भई ईलाका प्रहरी कार्यालयहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु, उपत्यका मातहत प्रहरी बृत,अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको कोहलपुर र बुटवल जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरुका साथै महानगरीय अपराध महाशाखको कार्यालय प्रमुखको रहि उत्कृष्ट कार्य गरेका छन् ।
विभिन्न देशहरुमा १३ वटा अन्तर्राष्टिय समेत २५ वटा पेशागत÷व्यावसायिक तालिम प्राप्त गरेका छन् । उनले नेपाल प्रहरीको बेरुजु उत्कृष्ट ढंगले प्रभावकारी योजना बनाई फछयौं गर्न सफल भएकोमा नेपाल सरकार माननीय गृहमन्त्री स्तरको निर्णयबाट ३ पटक नगर पुरस्कार सहित प्रशंसा पत्रबाट सम्मानीत भएका छन् ।
जिल्ला इन्चार्ज भई विभिन्न जिल्लामा रहँदा उत्कृष्ट काम गरे बापत सम्मान भएका उनी नेपाल प्रहरी भित्र सबैले रुचाएका र सबै दर्जाले मनपराएका अधिकृतका रुपमा परिचित छन् । नेपाल प्रहरी भित्र नीति निर्माण सम्बन्धी धेरै कार्यहरु गरेका छन् ।
१७ पदका लागि को को दौडधुपमा छन्
१७ जना डिआईजीका लागि यतिबेला एसएसपी दिपक थापा, उमेश जोशी, रामदत्त जोशी, सन्दीप भण्डारी, श्याम ज्ञवाली अशोक सिंह, सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, मीरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल, टेकबहादुर तामाङ, बसन्त कुँवर, जनक भट्टराई, विष्णु केसी, कुवेर कडायत, भरत बोहोरा, केदार ढकाल, अशोक सिंह, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, रविन्द्र केसी, किरण राणा, राजेशनाथ बास्तोला, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद पोखरेल र चन्द्र कुँवर दौडधुपमा लागि परेका छन् ।